20 435 ပွတ်။
ကျနော်တို့ကဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့အနုပညာရှင် Raphael Saadia နှင့်သင်၏ဂျူးဘာသာတင်ပြနေကြပါတယ်။ ဤလှပသောရွှေငွေနှင့်အတူကိုယ်စားလှယ်သင့်ရဲ့ပါးပျဉ်း, ဟေ့ "အော်ဟစ်တဲ့ကြေညာချက်အပိုင်းအစ! ငါယုဒလူဖွစျပါ၏, ငါကဂုဏ်ယူမိပါတယ်! "ဒါဟာဘယ်နေရာမှာမဆိုတဲလ်အဗစ်မှအထွဋ်ထိပ်ကနေဝတ်ဆင်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပြီး, သင်စတိုင်ကိုယ်စားပြုပါလိမ့်မယ်ငါသိ၏။
ဒါဝိဒ်သည်ဒါဝိဒ်သို့မဟုတ် Shield ၏ The Star, ရှေးမှကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းပို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mama နှင့် Papa ပုံပြင်များအများကြီးအောက်မေ့။ ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတို့သည်ဒဏ္ဍာရီသည်ဒါဝိဒ်ကိုသတ်ကြ၏ဂေါ, ရှေးဟောင်းဟီးဘရူးအမြိုးအနှယျသောလူမျိုးအပေါင်းကိုရုတ်တရက်သူအပေါင်းတို့သည်သူ၏အောင်ပွဲဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏, ဒါဝိဒ်သည်ရှောကျသှားသောအခါ, သူတို့ဤတွင် "ဟုပြောသည်! ဤသည်ဒါဝိဒ်သည်ဖိလိတ္တိလူကုမ္ပဏီကြီးဂေါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတို့တဘက်၌ဟာရာဇဝတ်မှုဒဏ်ခတ်သူကောင်လေးပါ! ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့! "ဒါဝိဒ်သည်နောက်ပိုင်းတွင်တဦးတည်းသောပြည်သို့ 12 အမြိုးအနှယျစည်းလုံးညီညွတ်တဲ့သူနန်းထိုင်၏။
ဒီနေ့မိမိတို့ကိုယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အာကာသအတွင်းဘို့ငါတို့ဘာသာရေးအဆင်တန်ဆာကနေသတိရပါ။ ငါသည်သင်တို့ကိုခေတ်သစ်ဣသရေလအမျိုး၌ရှေးခေတ် Yemenite လက်ဝတ်ရတနာဒီဇိုင်းကိုအစဉ်အလာ၏ဤအံ့သြဖွယ်အပိုင်းအစဆောင်ခဲ့လေ၏။ Yo လူမျိုး, မောင်လေးကလည်းကိုယ်စားပြု!